Xarunta Ciidanka Asluubta Ee Muqdisho Oo Dib Loo Howlgeliyey – Goobjoog News
Xarunta Ciidanka Asluubta Ee Muqdisho Oo Dib Loo Howlgeliyey
Wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Xuseen Xasan Cismaan ayaa maanta waxay si wadajir ah xarigga uga jareen xarunta ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ee Ex-control Afgooye, taasi oo dib loo howlgeliyey.
Xaruntaan oo burbursaneyd tan iyo dagaalladii sokeeye ee dalka ka dhacay ayaa lagu guuleystay in dib loo dhiso, waxaana si toos ah ugu shaqeyn doono ciidanka Asluubta.
Wasiir Xasan Xuseen ayaa sheegay in guul muhiim ah ay tahay dib u howlgelinta xaruntaan, isaga oo taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ku amaanay sida ay uga shaqeeyeen dib u howlgelinta xaruntaan.
Dhana kale, taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Sarreeye Gaas Xuseen Xasan ayaa isna dhankiisa sheegay in xaruntaan ay noqon doonto midda ugu weyn ee ay ku shaqeeyaan ciidamada Asluubta Soomaaliyeed.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dedaaleysa dib u howlglinta xarumaha muhiimka ah ee ciidamada iyo sidoo kale wasaaradaha.
DHAGEYSO: Cosoble Oo Sheegay Inuu Weli Yahay Madaxweynaha Hirshabelle
Xbqnmh yfwiub generic cialis cialis over the counter 2020
Orxheb mkrevp cialis price best place to buy cialis online...
Fpxbfy rcfany ed meds cialis 20...
Xuwqtk spdohe cheap generic viagra online when does cialis g...
Mediacom Webmail was established in 1986, and has 123 office...